Iran oo Cunaqabateyn Cusub lagu soo Rogay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Iran oo Cunaqabateyn Cusub lagu soo Rogay
Donald Trump Madaxweynaha Mareykanka ayaa Isniintii shalay ku soo rogay Iran, wuxuu ugu yeeray “cunaqabateynno cusub oo dhinaca dhaqaalaha ah” isagoo si gaar ah ula beegsaday hogaamiyaha ruuxiga ah ee Dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Trump ayaa saxiixay wareegto madaxweyne oo uu ku sheegay inuu ku hor istaagayo Tehran iyo Khamenei galaangal kasta oo ay u yeelan karaan suuqyada maaliyadda ee caalamka.
Sidoo kale Xoghayaha Maaliyadda iyo Lacagta ee Mareykanka Steven Manuchin ayaa sheegay in talaabadan inay fariisin doonto balaayiin dollar oo hantida Iran ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaabadan ku tilmaamay mid “adag oo u dhiganta jawaabta Mareykanka” ee dayaaraddii Drone ee Iran ay Mareykanka ka soo riday todobaadkii tagay.
Diyaaradda Dronetaas ayaa Mareykanku sheegay inay duuleysay hawada caalamiga ah markii ay Iran soo rideysay meel ku dhow gacanka Hurmuz ee Khaliijka Carabta. Laakiin Iran ayaa ku doodeysa inay ku soo xadgudubtay hawadeeda,isla markaana ay sidaas u soo riday.
Previous articleAdeer SAAM: Weli Ma Maqashay Magacan Astaanta Iyo Naanaysta U Noqday Maraykanka.
Next articleErdogan: Cidna fasax uga qaadan meyno danteena